"Ukubuka kwentaba ngaphandle kwewindi" "Projector" eduze kwaseZengcuo'an/Xiamen University/Shapowei/Botanical Garden/Huandao Road/Gulangyu - I-Airbnb
"Ukubuka kwentaba ngaphandle kwewindi" "Projector" eduze kwaseZengcuo'an/Xiamen University/Shapowei/Botanical Garden/Huandao Road/Gulangyu
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-跃
U-跃 Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala itholakala ekujuleni kweTatou Village kuSouth Huandao Road, okuhlalwa kuyo phakathi kwezintaba, amadwala nolwandle; ungakwazi ukunambitha ukudla okulula okukhethekile kweFujian eseningizimu ngohambo lwemizuzu eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili, okuhlanganisa kahle ukuzijabulisa nokunethezeka.
Amakamelo ahlomele kahle futhi avulekile. Amathoni e-Morandi athambile futhi amahle ahlangana nokufudumala kwefenisha yokhuni. Uhlezi phambi kwamafasitela amakhulu asuka phansi kuya ophahleni, ungakhuluma nemvelo futhi ujabulele ukuphila okuvuleke kakhudlwana nokusobala.
Indawo yokuhlala yasekhaya iwukuhlola nokuhlola okusha. Sonke isakhiwo sihlanganiswe phakathi kwezintaba ze-Qingyu namadwala, futhi yonke indawo ekhuphukayo iyingxoxo entsha phakathi kokubona nemvelo. Ungakwazi ukuzwa ukwakheka kwamadwala ngesandla sakho, futhi ungakwazi ukubuka amagagasi olwandle ngenkathi uhlezi unganyakazi.
Phakathi komoya oheleza kamnandi nomanzi wasolwandle nomoya oqabulayo wasezintabeni, hlala echibini ukuze ulalele uphayini, ubambe izinkanyezi futhi ubuke inyanga, ubukele izinyoni zidlala, futhi ulalele ulwandle lucula. Lena inkhulumomphendvulwano ejulile nethambile nemvelo.
Igumbi licishe libe ngamamitha-skwele angama-35, futhi indawo yomphakathi esophahleni ingabukwa, inendlu yokugezela ehlukile. Indawo eyomile futhi emanzi.
4.85 out of 5 stars from 200 reviews
4.85 · 200 okushiwo abanye
Itholakala esigodini esincane sokudoba esiseduze nolwandle e-Xiamen, sizungezwe izindawo zokungcebeleka ezincane zobuciko nezindlu zekhofi, izindawo zokudayisa ezikhethekile zokudla kwasolwandle, ukudla okulula kwe-barbecue nokunye ukudla. Ukuhamba kulula, futhi zonke ezikhangayo eziyinhloko e-Xiamen zingafinyelelwa. Kuthatha kuphela imizuzu engaphansi kweyi-10 ukuhamba kancane uye ogwini lolwandle. Inebhishi elihlanzeke kakhulu e-Xiamen. Kunezixhobo eziningi eziseceleni. Uma amagagasi ephansi, izixhobo zingabonakala zibheke esiqhingini sase-Kinmen e-Taiwan. Buka ulwandle emini kanye nezinkanyezi ebusuku. Umuzwa wokuthula owalahleka kudala, ungazidedela ubuke ukuphuma nokushona kwelanga, amagagasi namagagasi. Ngisho noma kuwubusuku obubodwa nje lapha, kuzoba inkumbulo engenakucimeka. Ngiyabona u-Xiamen emcabangweni wami shazi, futhi ngizoba nokunambitheka okude ~
Kunendawo yokwamukela izidlo ezizinikele, futhi kunendawo yokulanda imoto endaweni ekhethiwe eduze kwekhaya
U跃 Ungumbungazi ovelele